Okubelelwe elwazini - DataNumen, Inc.
Bhalisa i-Domain entsha
Dlulisela iiNdawo kuthi
Ungajonga njani ukuba ngaba i-DOLKR ingayilungisa ngempumelelo ifolda yam ye-Outlook (.pst) yefayile, ngokweziphumo eziveliswe yinguqulelo yedemo?
Nceda sebenzisa nje ingxelo yedemo ukubuyisa ifayile yakho ye-PST yesiqhelo ngesiqhelo kwi "Ukulungisa" isithuba. Emva ...
U-odola njani uguqulelo olupheleleyo lwe DataNumen Outlook Repair?
Inguqulelo yedemo iya kukhupha ifayile ye-PST emiselweyo equlathe yonke imiyalezo efunyenweyo kunye nezinye ...
Ungayifumana njani kwakhona idatha ye-Outlook kwiifayile zediski ebonakalayo, iifayile zokugcina kunye neefayile zomfanekiso wediski?
Nceda ujonge eli nqaku ngolwazi oluneenkcukacha kunye nemiyalelo yendlela yokufumana kwakhona i-Outlook ...
Ndisilele ukulungisa ifolda yam ye-Outlook (.pst) nge DataNumen Outlook Repair, ngoba?
Nxibelelana nenkxaso yethu yezobugcisa: support@datanumen.com. Ukuba kunokwenzeka, nceda ugcine i ...
Ngokubanzi, unokukhuphela ingxelo epheleleyo ye-DOLKR kwangoko emva kokuthumela iodolo ye-Intanethi ...
Umahluko kuphela phakathi kwezi mveliso zimbini kukuba basebenzisa imithombo yolwazi eyahlukileyo, njenge ...
Yintoni DataNumen Outlook Repair?
DataNumen Outlook Repair(DOLKR) (ngaphambili Advanced Outlook Repairyeyona mbono intle yeMicrosoft ...
Xa ndi start ukubuyisela, ndifumana umyalezo wemposiso "Nokuba akukho mxhasi wemeyile umxhasi okanye umxhasi wangoku weposi akanakho ukufeza isicelo semiyalezo. Nceda usebenzise iMicrosoft Office Outlook kwaye usete njengomthengi weposi emiselweyo." kwaye DataNumen Outlook Repair uyeka kwaoko. Ungayisombulula njani le ngxaki?
DataNumen Outlook Repair Ifuna i-32bit MAPI ukuba ifakwe kwaye isethwe ngokufanelekileyo kwikhompyuter ...
Xa ndilungisa ifayile ye-PST, ndifumana umyalezo wemposiso kwilog yokulungisa "Impazamo 6: Ayinakwenza indawo ekuyiwa kuyo ye-PST yefayile. Nge-Outlook 2000 kunye neenguqulelo zamva, nceda uqinisekise ukuba ii-Exchange Server components azifakwanga kwikhompyutha yangoku. Usenokubhekisa kule faq kuxwebhu loncedo ngolwazi oluneenkcukacha. " Ungayisombulula njani le ngxaki?
Impazamo yenzeka xa inkqubo esezantsi ye-MAPI kwikhompyuter yakho ingafakwanga okanye ingaqwalaselwanga ...
Loluphi uhlobo lweefayile zangaphandle ze-Outlook (.pst) ezinakho DataNumen Outlook Repair ukulungisa?
DataNumen Outlook Repair ixhasa ukulungisa ifolda yobuqu (.pst) yeefayile ezenziwe nguMicrosoft ...
Xa usebenzisa DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Exchange Recovery, ngamanye amaxesha unokufumana ...
Amatikiti enkxaso yam iZaziso Okubelelwe elwazini Iyakhuphela Ubume benethiwekhi Itikiti elivulekileyo
Copyright © 2021 DataNumenOnke amalungelo agciniwe.
Nceda ufake inombolo phakathi kuka-8 no-64 ubude begama eligqithisiweyo
Ubude begama eligqithisiweyo
Yenza iphasiwedi entsha
Khuphela kwibhodi eqhotyoshwayo kwaye Faka